Home Wararka Farmaajo oo ergo u dirsaday kooxda Shabaab – Sababta?
Farmaajo oo ergo u dirsaday kooxda Shabaab – Sababta?
Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay aya MOL u xaqiijiyay in Madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aya ergo u dirsaday kooxda Al Shabab.
Ergada Madaxweynaha aya Shabab raba in aay ku qanciyaan in ay soo saareen war saxaafadeed ay ku sheegayaan in ay diyaar u yihiin in ay wadahadalo la galaan Dowladda Federaalka ah, balse shuruud ay kooxda Shabab ka dhigaan in ay kaliya wada hadalo la galayaan Madaxweynaha Muddo xileedkiisa dhammaaday Maxamed Cabdullahi Farmaajo.
Farmaajo aya u muuqda mid quus ka taagan Doorashada la filaayo in dalka ka dhacdo wuxuuna isku daygii ugu danbeeyay ku codsaday in ay Shabab u muujiyaan taageero.
Waa Madaxweynihii ugu horreeyay oo Shabab wediista taageero, isagoo weliba Doorashadii 2017 uu sheegay in uu dalka uga ciribtiraayo kooxda shabab muddo laba sano ah.
Previous articleKooxda Ceelwaaq lagu Doortay iyo tan Garbahaarrey Yaa Sharci Ku jooga? Akhriso.
Next articleAxmad Karaash oo xilka ka qaaday wasiiradii Deni ku adeegan jiray
Dibad-bax ka dhan ah Dowlada oo Muqdisho ka soconaya
Xildhibaan Xassan Cabdi Ismaaciil:- Dowladu horta ha xoreeyso Af-gooye ka dibna...